အူရီဒူး “စိုက်ပျိုး” နှင့် လယ်ယာသီးနှံအထွက်တိုးစေမယ့် သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။
မင်္ဂလာပါ။ “စိုက်ပျိုး’’ ကတော့ လယ်ယာသီးနှံတွေ အထွက်တိုးစေဖို့ ကူညီပေးမယ့် အဖိုးတန် သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ မြန်မာ့တောင်သူဦးကြီးများရဲ့ ဘ၀ကို တိုးတက်စေဖို့ ဖန်တီးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ စမတ်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“စိုက်ပျိုး” အက်ပလီကေးရှင်းကို အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပြီး၊ အင်တာနက်ဖိုးပေးစရာမလိုဘဲ အခမဲ့လည်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
“စိုက်ပျိုး” အက်ပလီကေးရှင်းရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကတော့
၁. မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒပညာရှင် ဦးထွန်းလွင်၏ မိုးလေ၀သဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်များ
နိုင်ငံကျော်မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒပညာရှင် ဦးထွန်းလွင်၏ မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်းပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေသော မိုးလေ၀သအခြေအနေများကို “စိုက်ပျိုး” တွင် အပတ်စဉ် တင်ဆက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပြီး မိမိနေထိုင်ရာဒေသမှ ကောက်ပဲသီးနှံများကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကိုလည်း အမြဲတမ်း ကြိုတင်သိရှိပြီး ကာကွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့စိုက်ပျိုးမယ့် မျိုးစေ့အရည်အသွေးတွေကို စမ်းသပ်ပုံ နည်းလမ်းများ၊ အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ပုံနည်းလမ်းများကို တောင်သူလယ်သမားများ အနေနဲ့ “စိုက်ပျိုး” မှာ အသေးစိတ်လေ့လာ သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြေယာပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်လို့လည်း မိမိရဲ့ ပျိုးခင်းကို ပြင်ဆင်ပုံ၊ မျိုးစေ့ချပုံ၊ မြေသြဇာကျွေးပုံတို့ကို “စိုက်ပျိုး” မှာ ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
တောင်သူလယ်သမားများအတွက် မိမိရဲ့ ပျိုးခင်းအတွင်း နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ ရေသွင်းရေထုတ် ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို “စိုက်ပျိုး” ကတဆင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပျိုးခင်းအတွင်းရှိ ပေါင်းမြက်များကို နှိမ်နင်းခြင်း၊ ပေါင်းမြက်များမထအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်များကိုလည်း “စိုက်ပျိုး” မှာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
၆. သီးနှံဖျက်ပိုးနှင့် ရောဂါများကို အမျိုးအစား ခွဲခြားပေးခြင်း
“စိုက်ပျိုး” အက်ပလီကေးရှင်းမှာ တောင်သူလယ်သမားများရဲ့ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ သီးနှံဖျက်ပိုးများနှင့် ရောဂါများကို စနစ်တကျအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်မယ့် အသုံးဝင် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ သီးနှံဖျက်ပိုးနှင့် ရောဂါများကို မှန်ကန်စွာ ခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် သင့်လျော်တဲ့ ပိုးသတ်ဆေးကိုလည်း မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို အချိန်ကိုက် စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့် စနစ်တကျ သိုလှောင်ခြင်း စတဲ့ နည်းစနစ်တွေကို “စိုက်ပျိုး” အက်ပလီကေးရှင်းမှာ လေ့လာနိုင်ပြီး၊ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့စမ်းသပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
၈. ဒေသအလိုက် ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်များ
မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ရာသီဥတုလက္ခဏာများ၊ မိုးရေချိန်၊ အပူချိန်နှင့် လေတိုက်နှုန်း ပမာဏများကို “စိုက်ပျိုး” တွင် အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အရေးပေါ် ရာသီဥတု သတိပေးချက်များကိုလည်း သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အသေးစိတ်ကို ကြည့်ရှု့ရန် ဤနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။